Mere The E-skateboard Ya mere Sizzling ma nabata Site Ị. - Jomo Technology Co., Ltd
Nke ahụ bụ eziokwu, mgbe ha na-asị na ha na-na na pụrụ iche, e nwere otu ụdị nke a maara dị ka IOS na ahịa ugbua. Ndị a aka-free electric scooters ma ọ bụ electric skateboard nwere ike iwere na a nde ebe, ọ dịghị mkpa bụ ihe ị na-akpọ ha. Koowheel Kacha ọhụrụ version Electric skateboard Kooboard: Nke ahụ bụ a oké ụzọ na-eto eto nwere fun na-aga aga n'otu oge. Anyị na-na-atọ ụtọ nke a skateboard, mee ya dị ka mfe ime ka eji dị ka a moto skuta, mgbe nke na-enye ya ihe mmezi ntakịrị swag. Electric Skateboard na-stuffed na fun na ọ na-aghọ omume ntụrụndụ nke ọtụtụ na-eto dị iche iche. An electric skateboard e mere na sitere Koowheel brand na China.
N'ihi nke ahụ, ha na-ekwu, na skateboard bụghị naanị a njem na ngwá ọrụ ma mma mmadụ ndụ àgwà n'ụzọ ụfọdụ. Ọ nwere ike kwukwara mgbanwe na a smoother njem. Ọ bụrụ na ị na-na-achọgharị a onwe mode nke njem na ike gị si n'otu ebe gaa ebe ọzọ, ngwa ngwa, ị ga-ahọrọ n'ji ejiji. Otu akụkụ dị mkpa nke na-enweghị uche na njem hierarchy bụ na gwongworo na-ụzọ karịa onye ugbo ala nke ụkọ Ewepụ Ihe Mgbochi akụkụ-adọba ụgbọala. The nile n'otu n'otu nwere, n'ihi na ihe bụ isi oge, ulo oru na ụwa nke onwe onye na-guzozie njem.
Koowheel Skateboards na-wuru nwayọọ ma dị ike mgbe na-enye gị na smoothest njem si n'ebe. N'oge anyị research anyị chọpụtara na ọtụtụ Asian mba ama massively elu electro-agagharị na n'ụzọ ụfọdụ, ofụri a enterprise njem, anyị na e chere eletriki scooters, hover mbadamba na - skateboards! A batrị e tinye n'ọrụ na-ekwesịghị ịdị voltaji ma ọ bụ ntụpọ mkpụrụ ndụ na ọtụtụ Hover mbadamba jidere ọkụ ebe odori ma ọ bụ n'elu. Ma ọ bụghị ndị strangest ihe na-akpata banyere ha-na pụrụ ịbụ eziokwu na nke a afọ kasị ezumike ụgwọ ọrụ retains ini enye okụtde ke ọkụ. The nnọọ ihe mbụ ị na-achọpụta mgbe ọ bụla ị na-ele ndị ọhụrụ ibu skuuta bụ n'ezie ihe na-anọghị, ma ọ bụ a ọdịiche, ke N'ezie nke igwe. The Koowheel bụ a Chinese mere onwe guzozie skuuta na nke ahụ jikeere ise ọtụtụ hoverboard n'ihi na nke fashionable imewe.
Post oge: Oct-19-2017